Makwiriro andakazoita ndanwa kaPiritsi! – Vanoda Zvinhu
Babe rangu all the time raingogara richicomplainer kuti ndokurumidza kutunda. So I had been boring since patakatanga kudanana, becoz I was not satisfying her on bed pamwe pacho ndaitokurumidza kutunda asati atomboti kudi but aitozochancer pa2nd round. So chinzwa ka yakazotambika last Sunday 18 July. I woke in the morning preparing to go to church, but ndainzwa kuda bonde so ndakambozama kuudza bbe rangu kuti tiregere kuenda kuchrch kuti timboswera tose padheni pangu. Chainyanyo netsa raiziva kuti obvious mukomana wangu kuda kundikwira chete but asinganyatsonditundisa. So rakaramba rikati I have to go church becoz I know wat u want but haupedzi kuita zvinhu zvacho like Sunday we spend five hours tose but hauna chawakaita. Kungondinyemudza nemboro, etc etc…ha ndakabva ndaramwa ndikaenda kuchrch. Ndichisvika kuchrch bbe rikati ndave kumba ndikati am in church handiti waramba here ndobva rapedzisira rauyawo kuchurch.
As soon as after service ndakaenda kukabhawa ndakapfeka zvekuchurch ndikamwa masavannah dry 3 mahombe, ndisina kana kumbodya. Wen I finished I went home bbe rikatanga kundiwatsapa kuti ndiripi , ndikat ndiripadheni. Sezvineiwo rakabava rati ririkusvikapo the nxt few mins ndakabva ndamhanya pamakula, atinoti macula kana kuti maindia tumashops twemagroceries. Ndakabava ndatenga rimwe tablet randaingonzwa mafreinds angu achiti akangopinda imomo anongoti that tablet of sex, and then ndakangosvikawo ndikadaro undipewo nemasweets emahalls kuitira kunhuwirira mumuromo. Randipa ndakamhanya kumba ndikasvikirana nechibbe padheni. Ndakananga mukitchen first ndirarimwa fast apa ndanga ndakadhakwa bcoz ndanga ndamwa doro ndisati ndadya. Ndakadzoka ndokugara pabed apa mwana akabatana zvekubatana zviya zvekuti I knew kuti it was not my problem yekukurumidza kutunda but becoz of anga akanakisisa zviya zvekuti haaaa ma-1.
Ndakatanga nekuti uribho zviya zvisina nyadzi nekuti ndanga ndakadhakwa. Bbe ndyp zvikanzi bho!!!!!!, ndakaswedera ndikamusimudza zvikanzi am not in the mood, ndikati ahhh bbe y!!, ndakatanga kuribata kusvika ndaona munhu akundikissawo, then after that I removed all the clothes dzake ndikamuti ndibvisewo. Andibvisa ndakamuti nhasi ndoda kumbokugadzira size nechemumoyo. Apa ndaidya mahalls zvangu ndichiriromancer. Ndirimunhu asingafariri zvekudya beche musi uyu ndakaridya coz I take advantage yekudhakwa plus mahalls andaidya. Uyezve bbe raigara richicomplainer kuti ndiwe wakandivhura but unotya kudya beche rangu y. so that day ndakangoti ndiribusy kumuromancer ndakabva ndaisa muromo pabeche sweet ririmumuromo kwakuta kuyamwa beche apa richinaka rough ndakumuyamwa kwe almost 20mins kusvika razvimba. After that ndaona kuti bbe rakuda zvekusvirwa.
Ndakabva ndati kata. Ndakamukwira zcekuti apa atarisira zvemazuva ose zvekuita sejongwe. Ndakamusvira zvekusvika maminutes 30 ndisati ndatunda iye akatunda zvekusvika ka4 afta that ndakazotundiramo apo ndanga ndanzwa kuti katablet kemumaindia unoita 2rounds usina kumira irimo chete, ndakatundiramo kwakuenderera mberi. bbe she thot mayb it was 1 round but I dd 2 in 1 round.
Ndapedza ndakati huuuuuu, kufemereka. Ndakazomurova yechi2 yaaifungidzira kuti ndeyechi2 iyo iriyo ye3. Ndakamukwira zvemhando yepamusoro. Akanyorovedza machira angu zvaasati amboita since pandakamuvhura. Tapedza ndakamuperekedza so chakundinetsa chinhu 1 akunditi arikufungidzira kuti anenhumbu ini ndirikungozvishingisa ndichiti I will take u bbe but handisati ndave ready so zuva rake remaperiods iSaturday so ma1 although ndakamusertisfyer@last. iHarare Extreme
Next story Short Story: Red Lips part two
Previous story Short Story: Kusvira mbuya huudzwa